मधुमेह बिरामीले तल उल्लेखित काम गर्न सकिन्छ - ज्ञानविज्ञान
व्यायमसहितको स्वस्थ जीवनशैलीले तपाईंलाई मधुमेहबाट बचाउन सहयोग गर्छ । व्यायामले तपाईंलाई मधुमेहलगायत विभिन्न रोगबाट टाढा राख्छ ।
तपाईंले आफ्नो दिनको सुरुवात साधारण गतिविधी जस्तै साइक्लिङ र जगिंगबाट गर्न सक्नुहुन्छ ।
मधुमेहबाट बच्नको लागि सबैभन्दा सजिलो उपाय आफ्नो रगतको निरन्तर जाँच गर्नु हो । ४५ वर्षभन्दा माथिका मानिसले तीन वर्षको एकचोटी रगत जाँच गराउनुपर्ने हुन्छ ।
यदि तपाईंको रक्तचाप उच्च छ र मोटो हुनुहुन्छ भने तपाईंले निरन्तर रुपमा रगत जाँच गराइरहनुपर्छ ।
मानिसको शरिरलाई नभई नहुने तत्व पानी हो । दैनिक पर्याप्त मात्रामा पानी पिउँदा यसले रगतमा उच्च मात्रामा भएको सुगर लेभललाई बाहिर निकाल्ने काम गर्दछ भने यसले बढ्नसमेत दिँदैन ।
पानीले तपाईंको मुटुको रोग र मधुमेहलाई पनि टाढा राख्दछ ।
उच्च प्रोटिनयुक्त खानाः
मधुमेहको खतरामा रहेका मानिसहरुले आफ्नो खानामा उच्च प्रोटिनयुक्त खानेकुरा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्बोहाइड्रेट र बोसोयुक्त खानालाई सकेसम्म कम खाने गर्नुपर्छ ।
उच्च प्रोटिनयुक्त खानाले शरिरमा उत्पन्न हुने ऊर्जालाई सामान्य बनाइराख्न सहयोग गर्छ भने मेटाबोलिजमलाई पनि बढाउने कार्य गर्दछ ।
Topics #उल्लेखित काम #मधुमेह बिरामी
Don't Miss it के खाँदा झर्छ कपाल ? जन्नुहोस
Up Next केही यस्ता खाने कुराहरुबाट पुरुषहरु सजग रहनुपर्छ
तपाई भाग्य, सौभाग्य वा दुर्भाग्यलाई मान्नु हुन्छ कि हुन्न ? कतिलाई यो अन्धविश्वास लाग्छ भने कतिलाई आश्था । भाग्यलाई अन्धविश्वास…
१. आफ्नो घरको कुकुरलाई आवश्यक कुरा आफैँ सिकाउनुहोस्, अरूलाई तालिम दिन लगाउनु खासै ठीक होइन । कुकुरलाई तालिम दिने अनुभवी…